Gosi Top | Ozi, Nyocha, Top Nsuso, Olee otú Iji Videos & Blogs
nweta 3% ego na petrol / dizel na free £ 50 gas / ụgwọ ọkụ n'aka
Debanyere Shell Energy via ihe ịrịba ama elu button n'okpuru, na recieve a £ 50 ụgwọ kaadị. Dị ka a Shell Energy ahịa ị bụ elgible na-enweta a 3% discount on fuel for each time you fill up. To activate the offer, ị ga-mkpa na ndị Shell Go + ngwa. …
Ubuntu faịlụ manager a na-akpọ Nautilus. The iwu ga-emeghe Nautilus dị ka mgbọrọgwụ si ọnụ. Nautilus ga-emeghe malite na User obibi directory sudo Nautilus arụ Iji oghe Nautilus dị ka mgbọrọgwụ na ọnụ dị ugbu arụ ọrụ directory, gbakwunyere a ntụpọ ahụ dị n'elu iwu. sudo Nautilus arụ ọrụ …
Ka 27, 2019
Your Pixel 3 ma ọ bụ Pixel 3 XL nwere ike igbochi oku na-adịghị na igbochi ndepụta. Na Phone ngwa Menu -> Ntọala -> Egbochiri nọmba, na ọnụ ọgụgụ ndị na-egbochi ma ekwentị adịghị anata oku. Oku na-na-ngọngọ n'ihi adịghị ichegbu agbanyere. Lelee na-adịghị…
Ka 11, 2019